नुवाकोटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहकाे शेरा दरबार विप्लबकाे कब्जामा - Bidur Khabar
नुवाकोटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहकाे शेरा दरबार विप्लबकाे कब्जामा
विदुर खबर २०७५ साउन ३१ गते ३:४४
नुवाकोट, पृथ्वीनारायण शाहले गर्मी महिनाका लागि भनेर बनाएकाे एेतिहासिक शेरा दरबार बेहाल अबस्थामा छ । नुवाकाेटकाे शेरावेसीमा रहेकाे याे दरवार भग्न अबस्थामा रहेकाे छ । पृथ्वीनारायण शाहको समयमा राजा जाडो महिनामा नुवाकोट डाँडामा रहेकाे दरबार र गर्मी महिनामा तादी किनारमा रहेको शेरा बेसी दरबारमा बस्ने गर्दथे । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसके पछि पनि कर्कप्याट्रिक नुवाकोटको भ्रमणमा जादा पनि बहादुर शाहसंग यसै दरबारमा भेट गरेका थिए । बि.सं. १८९७-९८ तिर राजा राजेन्द्र तथा रानी साम्राज्य लक्ष्मी नुवाकोटमा भ्रमणमा जाँदा पनि यसै दरबारमा बसेका थिए ।
बि.सं. १९०३ मा यस शेरा बेसी दरबार भत्कियाे । दरबार भत्किएपछि भग्नावशेषमा परिणत भयाे । त्यसको धेरै वर्ष पछि जुद्धशम्शेर नुवाकोट भ्रमणमा जाँदा उनले भग्नावशेष दरबार बारेमा बुझ्न खोजे । श्री ३ जुद्धले राजा पृथ्वीनारायण शाहको गृष्मकालिन दरबारको भग्नावशेष हो भनेर जानकारी पाएपछि तत्कालै पुरानो दरबार जस्तै दरबार बनाउनु भनेर आदेश दिए । तर त्यसबेला पुरानो दरबार देख्ने कोही नभेटेको र पुरानो दरबारको कुनै चित्र पनि नभएकाेले शेराफाँटकाे भव्यता तथा दरबार परिसरबाट माेहित भएका जुद्धले अाफ्नै अनुमानमा दरबार बनाए ।
तर दरबार बनाउदा सोही पुरानो दरबारक्रो भग्नाबशेषमा रहेको इटाहरूको उपयोग गरिएको थियो । दरबार तयार भएपछि यस दरबारको नाम शेरा दरबार भनेर राखियो । तर पनि सुरक्षा, सम्बर्धन तथा बेवास्ताले गर्दा हाल यो दरबार भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।
याे दरबारपछि शाह वंशको सम्पतीको रूपमा नै रह्याे । यस दरबार पछिल्लो समय हेलन शाहको नाममा आएको थियो । हेलन शाहबाट १८१ रोपनीको यस दरबार र यसले चर्चेको जग्गा भूमाफियाको नाममा सारी अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रा.लि. को नाममा अाएकाे देखिन्छ । अहिले याे दरबार तथा जग्गा माओवादी बिप्लव समुहले कब्जा गरेर राखेकाे छ ।
बट्टार क्याम्पसको प्रमुखमा जितेन्द्र अर्याल
नुवाकोटमा सक्रिय कोरोना संक्रमित ५९ पुगे
विदुरमा एकैदिन १६ जना कोरोना संक्रमित भेटिए